China Diesel Engine Long Shaft Kuqondile Turbine Fire Pump ifektri abakhiqizi | UThongke
Khomba ipompo lamanzi
Iphampu yokudonsa yokuzimela
Long shaft futha
Impompo yamanzi olwandle
Impompo yamanzi ehlanzekile
Ipompo lokulwa nomlilo
Idizili ye-Diesel Engine Shaft Vertical Fire Turbine
Imodeli No: XBC-VTP
Amapompo wokulwa nomlilo we-XBC-VTP Series mpo ayizigaba zesigaba esisodwa, amaphampu we-multistage diffusers, akhiqizwa ngokuya nge-National Standard GB6245-2006 yakamuva. Siphinde sathuthukisa idizayini ngokubhekiswa kwezinga le-United States Fire Protection Association. Isetshenziselwa kakhulu ukunikezwa kwamanzi ngomlilo ku-petrochemical, igesi yemvelo, isitshalo samandla, indwangu kakotini, isikhumulo semikhumbi, ezokundiza, indawo yokugcina impahla, isakhiwo esiphakamayo nezinye izimboni. Ingasebenza futhi ekuthumeleni, ethangini lolwandle, emkhunjini womlilo nakwezinye izikhathi zokuphakela.
Single isigaba ekupheleni ukuncela uhlobo centrifugal NFPA FM fi ...
I-API610 ANSI Chemical Process Standard Petrochemical ...
MS Electrical High Pressure multistage amanzi ahlanzekile c ...
Ovundlile Split bezinhlamvu centrifugal amanzi olwandle destin ...
Imfucumfucu Yendle Engaphansi Emanzini Angaphansi Kwamanzi
Ukugeleza kwe-Axial Kuqondile kwe-MVS nokugeleza okuxubile ...
Imoto ephuthumayo ye-Diesel engine Drayivu Dry Se ...
♦ Pump, umshayeli, kanye isilawuli ogibele isisekelo ezivamile.
Unit Iyunithi yensimbi ejwayelekile iqeda isidingo sezindawo ezihlukile zokufaka.
Unit Iyunithi ejwayelekile inciphisa isidingo sokuxhuma izintambo nokuhlangana.
Izinsiza zifika ngokuthunyelwa okuhlanganisiwe, ukuvumela ukufakwa nokusingathwa okusheshayo nokwenziwe lula.
System Uhlelo olwenziwe ngokwezifiso, kufaka phakathi izesekeli, ukufakwa, nezakhiwo ezitholakalayo ukuhlangabezana nokucaciswa kwekhasimende.
Ensure Ukuqinisekisa ukwakheka
I-TKFLO Vertical Turbine Fire Pump Aizinzuzo:
♦ Ngomklamo nesakhiwo se-hydraulic esithuthukile, ukwamukela inqubo ye-Ashland yokwenza insimbi yokuhambisa, ukusebenzisa inqubo yokumboza i-epoxy ku-vane ye-impeller, nokukhethwa kwezinto ezinengqondo, vumela ipompo ukuthi libe nokusebenza okuhle nempilo ende.
Device Idivayisi yesihlabathi esine-whirl nesakhiwo esifana ne-maze kwenza isihlabathi singakwazi ukungena kumabheringi.
♦ Izinjini zikadizili yonke imikhiqizo esezingeni eliphakeme yasekhaya noma engenisiwe, enezici zokuziphatha okuhle kokuqala, amandla aqinile okugcwala ngokweqile, ukwakheka okuqinile, okulungele ukugcinwa, okulula ukuyisebenzisa, futhi okuzenzakalelayo kakhulu.
Amayunithi wempompo yomlilo we-TONGKE Pump, Amasistimu, kanye Nezinhlelo Ezihlanganisiwe
Ukufakwa kwe-TONGKE Fire Pump (i-UL ivunyelwe, Landela i-NFPA 20 ne-CCCF) iletha ukuvikelwa komlilo okuphezulu ezikhungweni zomhlaba wonke. UTONGKE Pump ubelokhu ehlinzeka ngemisebenzi ephelele, kusukela kosizo lwezobunjiniyela kuya ekwakhiweni kwamanga endlu kuya ekuqaleni kwensimu. Imikhiqizo yakhelwe kusuka ekukhetheni okubanzi kwamaphampu, amadrayivu, izilawuli, amapuleti ayisisekelo nezinsiza. Ukukhethwa kwamaphampu kufaka phakathi amaphampu omlilo we-centrifugal ovundlile, aku-inthanethi kanye namapompo we-turbine amile.
Womabili amamodeli avundlile nampo ahlinzeka ngamakhono afinyelela ku-5,000 gpm. Amamodeli wokudonsa wokugcina aletha amandla ku-2,000 gpm. Amayunithi we-in-line angakhiqiza i-1,500 gpm. Ububanzi bamakhanda busuka ku-100 ft kuye ku-1,600 ft ngamamitha angama-500. Amapompo anikwe amandla ngezinjini ezisebenza ngogesi, izinjini zikadizili noma ama-turbine kagesi. Amaphampu omlilo ajwayelekile angama-Ductile cast iron anokufakwa kwethusi. TONGKE ukuphakela okufakiwe nezesekeli ezinconywe yiNFPA 20.
Izicelo ziyahlukahluka kuncane, okuyisisekelo imoto kagesi eqhutshwa yenjini edonsa ngodizili, izinhlelo ezihlanganisiwe. Amayunithi ajwayelekile enzelwe ukuphatha amanzi ahlanzekile, kepha izinto ezikhethekile ziyatholakala zamanzi olwandle kanye nezicelo ezikhethekile zoketshezi.
Amaphampu we-TONGKE Fire Pumps enza ukusebenza okuphezulu kwezolimo, i-General Industry, i-Building Trade, i-Power Industry, i-Fire Protection, i-Municipal, ne-Process applications.
Uthathe isinqumo sokunciphisa ubungozi bokulimala komlilo esikhungweni sakho ngokufaka uhlelo lwe-UL, ULC olufakwe ohlwini lwempompo yomlilo. Isinqumo sakho esilandelayo ukuthi yiluphi uhlelo okufanele uluthenge.
Ufuna iphampu yomlilo efakazelwa ekufakweni komhlaba wonke. Kwenziwe uchwepheshe onolwazi oluningi emkhakheni wokuvikela umlilo. Ufuna insizakalo ephelele yokuqalisa izinkambu. Ufuna Ipompo YETONGKE.
Ukuhlinzeka ngezixazululo zempompo I-TONGKE Ingakufeza Kwakho Izimfuneko:
Qedela amakhono okwenziwa ngaphakathi endlini
Amandla wokuhlola owenziwa ngemishini ngemishini enefenisha yamakhasimende yawo wonke amazinga we-NFPA
Amamodeli avundlile wamandla ukuya ku-2,500 gpm
Izinhlobo eziqondile zamandla afinyelela ku-5,000 gpm
Amamodeli we-in-line wamandla ukuya ku-1,500 gpm
Amamodeli wokudonsa wokugcina wamandla ukuya ku-1,500 gpm
AmaDrayivu: injini kagesi noma injini kadizili
Amayunithi ayisisekelo nezinhlelo ezihlanganisiwe.
Amayunithi Wompompo Womlilo nezinhlelo Ezihlanganisiwe
Amaphampu womlilo we-Electric Motor Drive kanye ne-Diesel Engine Drive anganikezwa nganoma iyiphi inhlanganisela yamaphampu, amadrayivu, izilawuli kanye nezinsiza zezicelo zomsebenzi womlilo ezibalwe futhi zavunywa futhi ezingabhalisiwe. Amayunithi ahlanganisiwe nezinhlelo eziphansi zokufaka impompo yomlilo bese uzinikeza lokhu
Ukuhlangabezana nezincomo zamazinga e-National Fire Protection Association njengoba ashicilelwe ku-Pamphlet 20 yawo, uhlelo lwakamuva, izesekeli ezithile ziyadingeka kukho konke ukufakwa kwepompo yomlilo. Zizohluka, kepha, zivumelane nezidingo zokufakwa ngakunye komuntu kanye nezidingo zeziphathimandla zomshuwalense wendawo. I-Tongke Pump ihlinzeka ngezinto eziningi zokufakwa kwepompo yomlilo ezibandakanya: i-concentric discharge increaser, i-casing relief valve, i-eccentric suction reducer, i-tee ekhuphuka yokukhipha, isigaxa sokugcwala, ikhanda le-valve hose, ama-valve hose, ama-hose valve caps namaketanga, ama-gauge wokukhipha, i-valve yokusiza, i-valve yokukhipha umoya ezenzakalelayo, i-flow meter, ne-valve yokudonsa ibhola Akunandaba ukuthi yini edingekayo, iSterling inolayini ophelele wezesekeli ezitholakalayo futhi ingahlangabezana nezidingo zokufakwa ngakunye.
Amashadi akhiqizwe ngezansi akhombisa ngokusobala izesekeli eziningi kanye nokushayela okungakhethwa okutholakala ngawo wonke amaphampu omlilo oThongke nezinhlelo ezihlanganisiwe.
U. Yini eyenza ipompo lomlilo lihluke kwezinye izinhlobo zamaphampu?
Okokuqala, bahlangabezana nezidingo ezinzima zeNFPA Pamphlet 20, Underwriters Laboratories kanye neFortugal Mutual Research Corporation yokwethembeka nesevisi engaphumeleli ngaphansi kwezimo ezinzima kakhulu nezindayo. Leli qiniso lilodwa kufanele likhulume kahle ngekhwalithi yomkhiqizo we-TKFLO nezici zokuklanywa kwe-premium. Amaphampu omlilo ayadingeka ukukhiqiza amazinga wokuhamba athile (i-GPM) nezingcindezi ezingama-40 PSI noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ama-ejensi ashiwo ngenhla eluleka ukuthi amaphampu kufanele akhiqize okungenani ama-65% alowo mcindezelo ku-150% wokugeleza okulinganisiwe - futhi sonke lesi sikhathi sisebenza esimweni sokuphakamisa izinyawo eziyi-15. Amarowu wokusebenza kumele abe njalo ukuthi ikhanda elivalwayo, noma i- "churn," lisuka ku-101% liye ku-140% lekhanda elilinganisiwe, kuya ngokwencazelo ye-ejensi yethemu. Izimpompo zomlilo zeTKFLO azinikezelwanga insizakalo yepompo yomlilo ngaphandle kokuthi zihlangabezane nezidingo zazo zonke izinhlaka.
Ngaphandle kwezici zokusebenza, amaphampu omlilo we-TKFLO ahlolisiswa ngokucophelela yiNFPA ne-FM ukuthembeka nempilo ende ngokuhlaziya ukwakhiwa nokwakhiwa kwawo. Ukwenza ubuqotho be-casing, ngokwesibonelo, kufanele kufaneleke ukumelana nokuhlolwa kwe-hydrostatic okuphindwe kathathu ingcindezi yokusebenza enkulu ngaphandle kokuqhuma! Umklamo we-TKFLO ohlangene futhi owenziwe kahle usivumela ukwanelisa le ncazelo ngezinhlobo zethu eziningi ze-410 ne-420. Izibalo zobunjiniyela zokuthwala impilo, ukucindezelwa kwe-bolt, shaft deflection, kanye nengcindezi ye-shear nazo kufanele zithunyelwe kuNFPA. kanye ne-FM futhi kufanele iwele ngaphansi kwemikhawulo egcinayo ukuze iqinisekise ukuthembeka okukhulu. Ekugcineni, ngemuva kokuthi zonke izidingo zokuqala sezifinyelelwe, ipompo selikulungele ukuhlolwa kokugcina kwezitifiketi elizofakazelwa abamele abavela ekuhlolweni kwe-UL ne-FM Performance kuzodinga ukuthi kube nobubanzi obuningi be-impeller obuzokhonjiswa ngokwenelisayo, kufaka phakathi ubuncane nobukhulu, futhi phakathi.
U. Yisiphi isikhathi esivamile sokuhola sepompo yomlilo?
A. Izikhathi ezijwayelekile zokuhola ziqhuba amasonto ama-5-8 kusukela kukhishwe i-oda. Sishayele ngemininingwane.
Q. Iyiphi indlela elula yokunquma ukujikeleza kwepompo?
A. Ukuze kube nepompo lomlilo elihlukanisiwe elengayo, uma uhleli emotweni ebhekene nepompo yomlilo, kusukela kule ndawo ephakeme iphampu lisesandleni sokudla, noma liwashi lewashi, uma ukuncela kuqhamuka kwesokudla nokukhiphayo ubheke kwesobunxele. Okuphambene kuyiqiniso ngokujikeleza kwesokunxele, noma ukuzungezisa okuphikisana newashi. Isihluthulelo yindawo yokubuka lapho kuxoxwa ngalesi sihloko. Qiniseka ukuthi womabili la maqembu abuka isigaxa sepompo ohlangothini olufanayo.
U. Izinjini nama-motors alinganiselwa kanjani amaphampu omlilo?
Ama-Motors nezinjini ezinikezwe amaphampu omlilo we-TKFLO alinganiselwe ngokusho kwe-UL, FM ne-NFPA 20 (2013), futhi enzelwe ukusebenza kunoma yiliphi iphuzu lejika lempompo yomlilo ngaphandle kokweqa isici sesevisi yemoto, noma usayizi wenjini. Ungakhohliswa ngokucabanga ukuthi ama-motors alinganiselwa ku-150% kuphela wamandla weplate yegama. Kuvamile ukuthi amaphampu omlilo asebenze kahle ngaphezu kwe-150% yomthamo olinganisiwe (isibonelo, uma kukhona ipayipi elivulekile noma ipayipi eliphukile ngaphansi komfula).
Ukuthola eminye imininingwane, sicela ubheke kuNFPA 20 (2013) isigaba 4.7.6, UL-448 isigaba 24.8, kanye neFord Mutual's Approval Standard for Split Case Fire Pumps, Class 1311, isigaba 4.1.2. Onke ama-motors nezinjini ezinikezwe amaphampu omlilo we-TKFLO alinganiselwa enhlosweni yangempela ye-NFPA 20, UL, ne-Factory Mutual.
Njengoba ama-motor pump pump kungalindelekile ukuthi asebenze ngokuqhubekayo, avame ukukalwa ukusizakala nge-1.15 motor service factor. Ngakho-ke ngokungafani namanzi asekhaya noma izicelo zempompo ye-HVAC, imoto yepompo yomlilo ayihlali ilinganiselwa “ngokungagcini ngokweqile” ngaphesheya kwejika. Uma nje ungadluli isici sesevisi ye-motor 1.15, kuvunyelwe. Okuhlukile kulokhu kulapho kusetshenziswa imoto kagesi eguquguqukayo yesivinini se-inverter.
U. Ngingakwazi ukusebenzisa i-flow meter loop esikhundleni seheda yokuhlola?
A. I-flow meter loop ivame ukusebenza lapho ukugeleza kwamanzi ngokweqile ngemibhobho ejwayelekile ye-UL Playpipe kungahambi kahle; kodwa-ke, uma usebenzisa iluphu yemitha yokugeleza evaliwe ezungeze ipompo lomlilo, ungahle uhlole amaphampu ukusebenza kwe-hydraulic, kepha awuhloli amanzi, okuyisici esibucayi sohlelo lwempompo yomlilo. Uma kunokuphazamiseka ekunikezelweni kwamanzi, lokhu ngeke kubonakale nge-flow meter loop, kepha ngokuqinisekile kuzodalulwa ngokuhlola iphampu yomlilo enamapayipi nama-Playpipes. Ekuqalisweni kokuqala kohlelo lwempompo yomlilo, sihlala siphikelela ekugelezeni kwamanzi ngohlelo ukuqinisekisa ubuqotho bohlelo lonke.
Uma iluphu yemitha yokugeleza ibuyiselwa emuva emanzini - njengetangi lamanzi angaphezulu komhlaba - lapho-ke ngaphansi kwalelo lungiselelo uzokwazi ukuhlola zombili iphampu yomlilo namanzi. Vele uqiniseke ukuthi imitha yakho yokuhamba ilinganiswe kahle.
U. Ngabe ngidinga ukukhathazeka nge-NPSH kuzicelo zepompo yomlilo?
Akuvamile. I-NPSH (inetha elihle lokudonsa ikhanda) ukucatshangelwa okubalulekile kuzicelo zezimboni, njengokuphakelwa kwama-boiler noma amaphampu wamanzi ashisayo. Ngamaphampu omlilo, noma kunjalo, ubhekene namanzi abandayo, asebenzisa yonke ingcindezi yasemoyeni ukukuzuzisa. Amaphampu omlilo adinga "ukuncela okugcwele amanzi," lapho amanzi afika khona kumpompoza ngamandla adonsela phansi. Udinga lokhu ukuze uqinisekise iphampu eyi-100% yesikhathi, ukuze kuthi lapho unomlilo, ipompo lakho lisebenze! Impela kungenzeka ukufaka ipompo lomlilo nge-valve yonyawo noma ezinye izindlela zokufakelwa zokuncoma, kepha ayikho indlela yokuqinisekisa u-100% ukuthi ipompo lizosebenza kahle lapho kubizwa ukuthi lisebenze. Ezimpompini eziningi zokudonsa eziphindwe kabili zokuhlukanisa, kuthatha kuphela cishe u-3% womoya okokufaka kwepompo ukwenza ukuthi ipompo lingasebenzi. Ngaleso sizathu, ngeke uthole umkhiqizi wepompo lomlilo ozimisele ukubeka engcupheni ukuthengisa iphampu yomlilo nganoma yikuphi ukufakwa okungaqinisekisi "ukuncela okugcwele" kupompo yomlilo ngaso sonke isikhathi.
U. Uzophendula nini eminye imibuzo kuleli khasi le-FAQ?
A. Sizobangeza njengoba kuphakama izingqinamba, kodwa zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngemibuzo yakho!
Langaphambilini I-API610 ANSI Chemical Process Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Oil Transfer Pump
Olandelayo: I-LDP Series Single-Stage End-Suction Horizontal Centrifugal Water Pumps
Amandla 20-1400 m3/ h
Ingcindezi Yokusebenza kuze kufike ku-2.0Mpa
Ububanzi I-DN 25-400 mm
Uketshezi amanzi ahlanzekile noma uketshezi lomzimba nolwamakhemikhali Amanzi angathathi hlangothi, PH = 6.5-8.5, okuqukethwe kwe-chloride ion = 400mg / l, izinga lokushisa eliphakathi nendawo lingaphansi kuka-40 ℃
Ijubane lempompo I-1000-3600 RPM
Injini ICummins, Deutz, Perkin noma olunye uhlobo lwaseChina
Isitsha: Insimbi yensimbi, Insimbi engagqwali
Shaft: Insimbi engagqwali
Impeller: Sakaza iron, Bronze noma Insimbi engagqwali
Ikhanda lokukhipha: Insimbi yensimbi noma i-carbon steel
Isetshenziselwa kakhulu ukunikezwa kwamanzi ngomlilo ku-petrochemical, igesi yemvelo, isitshalo samandla, indwangu kakotini, isikhumulo semikhumbi, ezokundiza, indawo yokugcina impahla, isakhiwo esiphakamayo nezinye izimboni. Ingasebenza futhi ekuthumeleni, ethangini lolwandle, emkhunjini womlilo nakwezinye izikhathi zokuphakela.
Imininingwane yokuxhumanaShanghai Tongke Flow Technology Co., LTD
Umuntu Ongathintwa Naye: Mnu. Seth Chan
I-ID ye-Skype: i-seth-chan
Single isigaba ekupheleni ukuncela uhlobo centrifugal NFPA ...
Multistage Fire Pump Engagqwali Izinto ...
Ipompo yomlilo ye-Multisatge ephezulu yengcindezi yomlilo
Split bezinhlamvu kabili ukuncela uhlobo NFPA UL FM fir ...
Factory Ikheli: No.111, Shenjiabang Road, Qingpu District, Shanghai, China
Iselula ne-WhatsApp: 0086-13817768896